iCloud အကောင့်ကို iPad မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple IDs များစွာကိုရယူခြင်းသည်အကြံမပြုပါ။ ဝယ်သူတိုင်း Apple Store တွင် ၀ ယ်သည် ကြောင်းအကောင့်နှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့်အခြားသူများလွှဲပြောင်းမရနိုင်ပါတီထွင်သူသည်ကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်များစွာတွင်တူညီသော ၀ ယ်ယူခြင်းကိုခွင့်မပြုပါကမိသားစုတွင်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့၎င်းကစီစဉ်သူသည်စီမံခန့်ခွဲသောအုပ်စုအတွင်းရှိဝယ်ယူမှုအားလုံးကိုခွင့်ပြုရန်တာဝန်ခံသောမိသားစုတွင်ပြုလုပ်သည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iCloud အကောင့်ကိုအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်အကြိမ်ကြိမ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ နေသော်လည်း အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအခက်အခဲများပါဝင်ပါဘူးအကယ်၍ သင်သည်အဆင့်များကိုမှန်ကန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက၊ လျှောက်လွှာဝယ်ယူမှုနှင့် (၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင့်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ) ပြသနာများ၊ ထပ်တူပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) အချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်းပြproblemsနာများ၊ အသုံးချဆော့ဝဲလ်များကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ID ကို ... ဥပမာတချို့ပေး။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ Apple IDs အများကြီးရှိရင်အကြံပြုထားပါတယ် သူတို့အားလုံးကိုတလုံးတည်းစုစည်းရန်ကြိုးစားနေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ဆက်နွယ်မှုကိုမပြောင်းရန် (မိသားစုသည်အဆင်ပြေသည်။ သို့သော် developer များကစိတ်ကိုအပြည့်အ ၀ မရမချင်း၊ အကောင့်များစွာဖြင့်ကစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဖန်တီးသည်။ ) အကယ်၍ သင်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်သင်သည်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်၏အက်ဒီအိုင်နှင့်ပေါင်းသင်းသည့်အခါထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကိရိယာများအုပ်စုထဲသို့ထည့်လိုက်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသင်သိလိမ့်မည်။
iPad မှ iCloud အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့သွားရမယ် ချိန်ညှိချက်များ> iCloud.
iCloud ထဲမှာကျနော်တို့ကပြသတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အဆုံးမှာသွားလိမ့်မယ် logout.
ကျနော်တို့ Close session ကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးတော့ကိရိယာကကျွန်တော်တို့ကို session ကိုပိတ်လိုက်လျှင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာပိုစတာကိုပြသပါလိမ့်မယ် iCloud မှတဆင့်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ပြက္ခဒိန်နှင့်အဆက်အသွယ်များကို iCloud နှင့်ထပ်တူပြုပါကသင်ထွက်သွားသည့်အခါဤအချက်အလက်အားလုံးသည်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုပါက Close session ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ID နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iCloud » iPad မှ iCloud အကောင့်ကိုဖျက်နည်း
Carmen Moreno ဟုသူကပြောသည်
iCloud နှင့်သက်ဆိုင်သောအီးမေးလ်အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း။ အဲ့ဒီအီးမေးလ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Apple ID ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ iCloud အခြေအနေအသစ်ကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားသောအခါ system လည်ပတ်နေပြီးလုပ်ငန်းမပြီးဆုံးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carmen Moreno အားပြန်ပြောပါ
စကားဝှက်နှင့်လုံခြုံရေးအဖြေများကိုမေ့သွားပါက icloud အကောင့်တစ်ခုကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်နည်း ???????????????
Apple Support ကိုခေါ်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး၎င်းကိုအသစ်ပြောင်းရန်ယခင်အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်အားမေးပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၎င်းသည် ID အဟောင်းများအားမွမ်းမံမှုများအတွက်တောင်းခံနေပါသည်
Pad pro လိုပေမယ့် mobile နဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပြproblemsနာမရှိဘဲ Windows မှာသူတို့နဲ့ပိုပြီးဆင်တူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ပေးသည်
အသုံးပြုထားတဲ့ iPad ကိုအမွေဆက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဟာ iCloud နဲ့ link ကိုမဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါဘူး
ကျွန်ုပ်၏စက်ကိုမဖျက်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ID နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သည်တိုင်းကျွန်ုပ်၏အကောင့်ပိတ်ဆို့ခံထားရသောစာတစ်စောင်ရရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်စကားဝှက်ကို ထပ်မံ၍ ရရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်စကားဝှက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်းလဲနေသည့်အဆင့်များကိုလိုက်နာသည်။ တစ်ယောက်ယောက်သိလား
တစ်ယောက်ယောက်က iPad မပျက်သွားဘဲဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ငါကြောက်တယ်
သူတို့ကစကားဝှက်မရှိပဲ icoud အကောင့်ကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့ကံမကောင်းတာက၊ ငါကံဆိုးချင်ငါ Mac ကိုငှားလိုက်တယ်။ အိုင်ပက်နဲ့ထပ်တူပြုလိုက်တဲ့အခါမှာငါ mac ငှားခဲ့တဲ့သူရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ထားတယ်။ အခုတော့သူတို့ရဲ့ icoud အကောင့်ကို ipad ကနေမဖျက်နိုင်ဘူး။
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ နီးစပ်သောဂြိုလ်သားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ သူငယ်ချင်းကသူသည်သူ၏အကောင့်အမည်ကိုပင်မမှတ်မိကြောင်းပြောပြသည်။ ဤနေရာတွင်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ သို့သော်ဝေးလံသောနေရာတွင်တစ်ယောက်ယောက်ကပြုလုပ်သည်ကကျွန်ုပ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် သူ့ကို iPad mini 3!
သူတို့က ipad ကိုခြစ်ပြီးပိုင်ရှင်က icloud ကောင်တာကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်သူဖျက်လိုက်ချင်တယ်။
ငါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပျက်တယ် မယုံနိုင်စရာ အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်မရှိတော့သော iCloud အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်ပါ
Manuel အီး Montiel R ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်၏မိထွေးပထွေးကသူ့ကို Ipad ထုတ်ချေးပြီးသူကသူထံသို့အီးမေးလ်ပို့လိုက်သည်။ သူကကျွန်ုပ်ထံပြန်ပို့လိုက်သည်၊ သူသည်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမမှတ်မိတော့ပါ။ အချို့သောပရိုဂရမ်များကို Ipad သို့ကူးယူချင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားစကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ Ipad နှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်သူ့ထံမှမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
Manuel E. Montiel R. အားပြန်ကြားချက်
၂၀၁၂ မတိုင်မီ Mac များအတွက်ဆက်တိုက်ဖြစ်စေ၊
iPhone အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ PDF management app လေးခု